Taunggyi Times (တောငျကွီးတိုငျးမျ): ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမ်ျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပ
ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမ်ျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပ
ခွန်မေးလို့ (တောင်ကြီး) | ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
Burma Centrum Nederland မှ ကြီးမှူး၍ အနာဂါတ်ရှမ်းပြည် တိုင်းရင်းသားလူမ်ျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တောင်ကြီးမြို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ) ရုံးတွင် ဒီနေ့ နံနက် (၉) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ကျားဖြူပါတီ) ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်းမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး Burma Centrum Nederland အစီအစဉ် ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စစ်စကစ်ကီယား ကန့်စ်ထ် (Ms. Saskia Kunst) မှ ဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှုစနစ်၏ အင်္ဂါရပ် အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းနှင့် နိုင်ငံစနစ်အကူးအပြောင်းကာလတွင် ဒေသခံမှ စွမ်းရည်များ မြင့်တင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ လိုအပ်ကြောင်း၊ တက်ရောက်လာသည့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ ကျေးရွာမှ ရပ်မိရပ်ဖများအားလုံး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်စေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားသွားသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ်အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးခွန်လာမှ မိမိသွားရောက်လေ့လာ တွေ့ မြင်ခဲ့ရသည့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ အတွေ့ အကြုံနှင့် ခမာနီကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်ထက်က ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသားများ မည်ကဲ့သို့ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပုံများကို ဓါတ်ပုံဆလိုက်နှင့်တကွ တက်ရောက်ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အနာဂါတ်ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလူမ်ျိုးစုများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့နိုင်ငံရေးပါတီမှ ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးဖွံ့ ဖြိုးရေးအဖွဲ့ မှ ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ကျေးရွာမှ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ အနည်းဆုံး (၈၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဒေသဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်များကို လက်တွေ့ရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Taunggyitimes
ခွန်စိန်ဝင်း | ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၅ | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့ဘုရားဖြူရွာတွင် စစ်တပ်သိမ်းမြေယာများ ဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲ ရောင်းချလွဲပြောင်းမှုရှိနေ
ခွန်သန်းအောင် (တောင်ကြီး) | ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ် တောင်ကြီးမြို့၊ ပါမိုးနဲရွာ (ယခု ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၄) မှ စ...
ကိုးရီးယားဒုံး၊ ဗမာဒုံး နဲ့ ဒို့ရိုးရာမီးလုံး
By ဂါမဏိ ပအိုဝ်းရိုးရာ မီးဒုံးလွတ်ပွဲ ဗမာပြည်က ကမ္ဘာ့အပယ်ခံ အာဏာရူး နအဖ-ကြံ့ဖွတ်စစ်အစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့အပယ်ခံ အာဏာရူး မြောက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံ...
အမညျခံအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေမှ စဈတပျ၏လကျပါးစေ PNO/PNA ၏ တလှဲမူဝါဒ
ပအိုဝျး ပွညျသူ့စဈ (PNA) ယခု လတျတလောမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ပအိုဝျးပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့လို့ လူသိမြားတဲ့ PNA အဖှဲ့ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၈ ရကျမှ...
ပအိုဝ်းရိုးရာ အစားအစာဖြင့် တောင်ကြီးမြို့တွင် လူငယ်များမိတ်ဆုံစားပွဲ ပြုလုပ်
By ခွန်ထီးခမ်း | နိုဝင်ဘာလ 16 ၊ 2012 | တောင်ကြီးတိုင်းမ် တောင်ကြီး (တောင်ကြီးတိုင်းမ်) ။ ။ ပအိုဝ်းရိုးရာ ထမင်းဟင်းဖြင့် လူငယ်များ မိတ်ဆုံစား...
Tweets by @TaunggyiTime
Pa-Oh Tranditional Rocket Festival Song
သထွုံးပေး ခွန်ဗန်ချာ တဲမ်း ၀ါတွမ်းရွဉ် (ပအိုဝ်းဝတ္ထုဒွေါင်း)
သထွုံးပေး ခွန်ဗန်ချာ တဲမ်း ခါင်းလစ်ပါင်ခြံကွင် တိရိစ္ဆာန်းလွိုဆန်ရေ ၀တ္ထုဆွာ
ထွာနွောင်ဆရား လိတ်ပအိုဝ်းဗဟိုးသွဉ်တန် အမဲုင် (၂၀)
လို;အွဉ်;ရေ, တဲမ်းမဲုင်ခါ, စွိုးခွို,သမဲင်,တဖူ,ခြောင်,
လိတ်လဲုင် အက္ခရား၊ တဲမ်းလိတ်ဆရားတွမ်း နီပအိုဝ်းလွိုဆန်ရေ
နီရပ်ကိုတွမ်; သဘာဝ အသောင်အရင်,
Robbing The Future (Eng)
တို့အနာဂတ်အတွက် တို့တောင်ကို ကာကွယ်ကြစို့
Save Our Mountain Save Our Lives
Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)
Burma 2010 Political Registration Law
သြဂုတ် ၁၂ ရက် နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့မှာ ရိုးရာအကတင...
ပအိုဝ်းပြည်သူအတွက် ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင်များ ဘာတွေပြင...
ပအိုဝ်းအဖွဲ့အစည်းများ တောင်ကြီးမြို့တွင် စုပေါင်းဝ...
ကျောက်တန်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး လူငယ်များ သစ်ပင်စ...
ဟိုပုံးတွင် တောတောင်များစိမ်းလန်းဖို့ လူငယ်များသစ်...
ပအိုဝ်းစာ/ယဉ်အဖွဲ့ ဥပဒေလူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ဦးစီးသည့...
တောင်ကြီးမြို့တွင် USIP မှ ဦးစီးပြီး တရားဥပဒေစိုးမ...
တောင်ကြီးမြို့၌ ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင် ဦအောင်ခမ်းထီနှင...
ဆီဆိုင် ဘန်းယဉ်အခြေစိုက် ခမရ ၄၂၆ မှ အစိုးရတပ်မတော်...
ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့(ဗဟို) ဥပဒေ လူမှုကူည...
သစ်တောကြိုးဝိုင်းကို ထိန်းသိမ်းသည့် ရွာသားများအား ...
ဆီဆိုင်တွင် အစိုးရစစ်သား ရမ်းကားပစ်ခတ်မှုကြောင့် အပ...
အေးသာယာမှ တောင်ကြီးအတက် ဆိုက်ကယ်နှင့် ကား ယဉ်တိုက်...
ဆီဆိုင်၊ ဆိုက်ခေါဝ်ကျေးရွာမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှ...
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပအိုဝ်းအမျိုးသားစည်...
ရန်ကုန်တွင် ကုန်းကျော်တံတားတည်ဆောက်ပြီးသော်လည်း ယာ...
တောင်ကြီးမြို့မှ ပအိုဝ်းအမျိုးသားများဂေဟာ သမိုင်း
ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင်းများ ၂၀၁၅ မှာ မဲနိုင်လိုလျင် ပအ...
ပဋိပက္ခသတင်းစာပညာဆိုင်ရာ ဖိုရမ်တစ်ခုကို ရန်ကုန်တွင်...
တောင်ကြီးမြို့နယ် ကျေးရွာနေဒေသခံများကို မျိုးဆက်ပွ...
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကို ကန့်ကွက်ရှုတ်...
Home News Opinion Culture Statement Photo Publication & report About Pa-Oh Contact Us Other News & Media Links Sport
မောင်;တဆွူ; - ခွန်သာဒွန်း
နင်;ခံ,ထဉ်; - ကျို;ဆွုမ်;ဒျာ;
ဆွတ်,မဉ်လီလီ ပီမဉ်ဖြင်းဖြင်း - ခွန်ယောင်းယွာ,
Taunggyi Times. Simple theme. Powered by Blogger.